China Tricresyl Phosphate ngwaahịa na ndị na-eweta ngwaahịa | Uba
Tricresyl Phosphate bụ kemịkalụ kemịkalụ na ngwakọ ngwungwu nke CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO.
Tricresyl Phosphate bụ ihe na-enweghị ntụ ma ọ bụ na-acha odo odo odo mmanụ. Ọ bụ ihe na-esi ísì ụtọ, na-akwụsi ike, na-adịghịkwa agbanwe agbanwe. Ọ nwere ezigbo plasticizing ire ọkụ retardancy, mmanụ eguzogide, eletriki mkpuchi, na mfe nhazi. Tricresyl Phosphate anaghị igbari na mmiri ma nwee soluble na organic solvents dị ka benzene, alcohols, ethers, akwukwo nri mmanụ, ịnweta mmanụ. Ngwaahịa a bụ ihe dị mkpa plasticizer maka vinyl resins na nitrocellulose. A na-eji ya agba iji mee ka mgbanwe nke ihe nkiri agba dịkwuo elu. Ọ nwere ezigbo nkwekọrịta ma bụrụ roba, polyvinyl chloride, polyester, polyolefin na soft. Ire ọkụ na-ere ọkụ maka ụfụfụ polyurethane. Tricresyl Phosphate nwere ike inye polymer ezigbo nguzogide ihu igwe, nguzogide ihu igwe, iguzosi ike n'ezi, nguzogide radieshon, na akụrụngwa eletriki. Enwere ike iji ya dị ka mgbakwunye mmanụ ụgbọala, ihe mmanu mmanu, na mmanụ hydraulic. Tricresyl Phosphate dịwanye mma site na usoro ọhụụ yana ọ bụ nke ngwaahịa ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma. N’ezie, e nweghị “ihe mkpofu atọ” dị n’usoro mmepụta, ngwaahịa ndị ahụ adịghịkwa egbu egbu.
Tricresyl Phosphate bụ tumadi plasticizer ma nwee ezigbo ire ọkụ. Ọ nwere ebù nguzogide, iyi-eguzogide, na ala volatility, na ezi eletriki arụmọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe maka eriri USB PVC; Akpụkpọ anụ ahụ; Na-akpụ akpụ belt; Efere mkpa; Ihe ala, wdg. A pụkwara iji ya maka neoprene, nke a na-eji dị ka plasticizer na nchekwa na viscose fiber. Ngwaahịa ahụ na-egbu egbu, nwere mmetụta na-egbu egbu na sistemụ ụjọ nke etiti, enweghị ike iji ya maka ihe oriri na ọgwụ ọgwụ. Ọnụ ara; Ihe ụmụaka ji egwuri egwu, wdg
Inye na tricresyl phosphate price alo, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe tricresyl phosphate emepụta na China, na-eche ka ị zụta nnukwu 1330-78-5, tcp etolite ya factory.
1 、 Formula ： (CH3C6H4O) 3PO 2 、 Molecular weight ： 368 3 、 CAS NO.:1330-78-54、Nkọwapụta：Nkọwapụta：Mapụ mmiri mmiriFlash point ： 225 ℃ minAcid Value （mgKOH / g） 1 0.1 maxFree Phenol ： 0.1% maxColor Value (APHA): 80 max Water Content ： 0.1% maxspecific gravity (20 ℃): 1.16-1.185 、 Ngwa ： Jiri iji melite nguzogide abrasion nke mmanụ mmanu, ọkụ ọkụ na PVC, polyethylene, belt ebu, sịntetik ma ọ bụ roba nkịtị. , USB, wdg 6 、 Nkwakọba ： 230KG / nchara nchara ， 18.4tons / FCL。 Ngwaahịa a dị ize ndụ: UN 2574, Klas: 6.1
Inye na tricresyl phosphate price alo, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe tricresyl phosphate emepụta na suppliers na China, na-eche ka ị zụta nnukwu tricresyl phosphate etolite ya factory.